I-Mori Style Plus|100-intshi Yasekhaya Yetiyetha|Ikhishi Elivuliwe|Isikhungo Sebhizinisi SeDolobha laseNyuvesi|Ipaki Yemfundo Ephakeme Yase-Chashan, wamukelekile ukubonisana futhi ubhukhe~ - I-Airbnb
I-Mori Style Plus|100-intshi Yasekhaya Yetiyetha|Ikhishi Elivuliwe|Isikhungo Sebhizinisi SeDolobha laseNyuvesi|Ipaki Yemfundo Ephakeme Yase-Chashan, wamukelekile ukubonisana futhi ubhukhe~
Wenzhou, Zhejiang, i-China
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Zj
Isitayela somhlobiso wendlu ka-Muji sisebenzisa inombolo enkulu yefenisha elula nesimanje endlini, futhi ukusetshenziswa kwesitayela selogi kunezelwa ukukhanya okuthambile, ngethemba lokudala umoya wekhaya olula, okhululekile futhi ofudumele.
Le ndawo itholakala enkabeni yebhizinisi eSifundazweni sase-Ouhai, eDolobheni laseWenzhou, enezokuthutha ezilula kakhulu. Kuwuhambo lwemizuzu emi-5 kuphela ukuya esiteshini samabhasi. Kuseduze neNyuvesi yaseWenzhou, i-Wenzhou Medical College, i-Wenzhou Business School, i-Oujiang College, i-Wenzhou Vocational College namanye amakolishi. Esitezi esiphansi yisikhungo samabhizinisi esiphumelela kakhulu e-Chashan , lapho ungakwazi udle, uphuze, nokudlala., Vientiane City kuphela imizuzu eyishumi uhamba ngemoto kanye zokuthutha kuyinto elula kakhulu.
Ibhilidi okukhona le ndlu iyisakhiwo esisezingeni eliphezulu esifundeni sase-Ouhai, sithokozela ukunakekelwa kwezokuphepha kwempahla amahora angama-24. Ipaseji ihlanzwa nsuku zonke ngumuntu ozinikele. Ifakwe i-electronic code lock, ephephile futhi ezizimele, futhi inezinsiza eziphelele.
Indlu iyigumbi eliphelele elinendawo yokwakha engamamitha-skwele angama-50, enekhishi elivulekile kanye negumbi lokugezela elihlukile. Indlu ifakwe isikrini esingu-100-intshi, i-WIFI, isimo somoya, umshini wokuwasha, isiqandisi, i-induction cooker, i-tableware, irobhothi elishanelayo, isethi egcwele yezinto zangasese, njll.
Kungakhathaliseki ukuthi ngaphambi noma ngemva kokungena, siyajabula ukuphendula imibuzo yakho futhi sikunikeze usizo nganoma yisiphi isikhathi.Sithemba ukuthi le ndlu encane eyakhiwe yithi izokunikeza inkumbulo enhle yokuhlala e-Wenzhou.
-Ifakwe i-10,000 yuan cinema projector, ungabuka amafilimu e-3D futhi ujabulele ukushaqeka kwetiyetha ekhaya.
-Lungisa i-Xiaomi air purifier
-Ikhishi elivulekile elivulekile, zonke izinhlobo zamafutha, usawoti, isoso noviniga, kanye ne-toaster eyosiwe, ungapheka ukudla okumnandi uwedwa.
-Umshini wokuwasha, isiqandisi, izinsiza zokupholisa umoya ziphelele ukuze uhlangabezane nezidingo zakho zansuku zonke.
-Izingubo zokulala ezisezingeni eliphezulu zikwenza uzizwe ukhululekile njengokulala ekhaya.
Esakhiweni eside kunazo zonke esikhungweni samabhizinisi e-Wenzhou Higher Education Park, eduze ne-Wenzhou University Library, iXuezi Park Vientiane City, i-Wenzhou Paradise, i-Daluo Mountain Scenic Area, ungadla, uphuze futhi udlale.
Ungangithinta noma nini uma unemibuzo
Hlola ezinye izinketho ezise- Wenzhou namaphethelo